I-loft ngu-Toni Boldú - I-Airbnb
I-loft ngu-Toni Boldú
Les Borges Blanques, Catalunya, i-Spain
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Antoni
I-wifi esheshayo engu-72 Mbps, kanye nendawo yokusebenzela ekamelweni.
U-Antoni Ungumbungazi ovelele
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Jul 5.
I-loft ethokomele enazo zonke izinkonzo enkabeni yedolobha, inhloko-dolobha yama-garrigues, isifunda esidume ngamafutha omnqumo angemsulwa, esingesinye sezihamba phambili emhlabeni. Amakhilomitha angama-20 ukusuka enhlokodolobha iLleida kanye nama-35 ukusuka esikhumulweni sezindiza
Alguaire, 70 km ukusuka ogwini (Salou) futhi 135 km ukusuka Barcelona.
"Ngenxa yokuqubuka kwe-coronavirus, sinenhlanzeko eyeqisayo phakathi kwendawo ebekiwe nendawo ebekiwe futhi sivame ukubulala amagciwane ezindaweni ezisetshenziswa kakhulu."
Inhloso yami ukudala indawo yesimanjemanje, esondelene futhi ethokomele, ongayibona ezithombeni. I-loft isitezi sesibili, ayinakho i-lift.
ubusuku obungu-7 e- Les Borges Blanques
Njengazo zonke imizana emhlabeni, kukhona eziningi ezitolo nge izinga phezulu imikhiqizo zendawo (virgin extra amafutha omnqumo, Costers del Segre iwayini, amakinati, izithelo ezisanda kukhiwa, njll) njengoba emakethe masonto onke ngoLwezibili lapho abantu beze. Of isifunda sonke.
Siphinde sibe nekhefi ekhetheke kakhulu, e-Slovenia, edlalwa umculo osezingeni lokuqala ngeMigqibelo eminingi yonyaka kanye nemenyu yansuku zonke ebabazekayo ngentengo enhle.
Uzojabulela ukutholakala okuphelele ngakimi, kungakhathaliseki ukuthi ku-gastronomic, isevisi kanye / noma ulwazi lokungcebeleka. Ukwazi isiNgisi nesiFulentshi esiyisisekelo.
UAntoni Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: HUTL-047851
Hlola ezinye izinketho ezise- Les Borges Blanques namaphethelo